၁၃၇၉ – ခု၊ ကဆုန်လဆန်း ( ၁၁ ) ရက်၊ ၆. ၅. ၂၀၁၇. စနေနေ့က ကျင်းပသော အမှူ့ဆောင်စုံညီ အစည်းအဝေး – btmka
၁၃၇၉ – ခု၊ ကဆုန်လဆန်း ( ၁၁ ) ရက်၊ ၆. ၅. ၂၀၁၇. စနေနေ့က ကျင်းပသော အမှူ့ဆောင်စုံညီ အစည်းအဝေး
ပွဲစား ၊ကုန်သည် ၊စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်းကြီး ၁၃၇၉ – ခု၊ ကဆုန်လဆန်း ( ၁၁ ) ရက်၊ ၆. ၅. ၂၀၁၇. စနေနေ့က ကျင်းပသော အမှူ့ဆောင်စုံညီ အစည်းအဝေး ( ၁ / ၈၃ ) ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကုန်ပစ္စည်း အလုပ်သမားခ နှုန်းထားကို အောက်ပါအတိုင်းညှိနှိုင်း၍ အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ၎င်းနှုန်းထားများကို ၁၃၇၈ – ခု၊ ကဆုန်လဆန်း( ၁၂ ) ရက် ၊ ၇.၅.၂၀၁၇ ( တနင်္ဂနွေ) နေ့ကစ၍ အတည်ဖြစ်သည်။